🥇 Ngwa maka ịrụ ọrụ nke ọrụ na ndokwa nke ọrụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 911
Ngwa maka ịrụ ọrụ nke ọrụ na ndokwa nke ọrụ
Video nke ngwa maka arụmọrụ nke ọrụ na ịnye ọrụ
Dezie ngwa maka arụmọrụ nke ọrụ na ndokwa nke ọrụ
Omume nke ngwa ọrụ na ntinye nke ọrụ - ngwa kọmputa mepụtara ma zubere dịka atụmatụ, nyocha, nyocha, na njikwa nke ọrụ mmepụta metụtara arụmọrụ nke ọrụ na ịnye ọrụ.
Omume ngwa na inye ihe omume ma ọ bụ mmemme mmemme na-enyere gị aka ịmata ọdịiche dị n'etiti arụmọrụ ọrụ dị ka ihe si na nsonaazụ ngwaahịa na njirimara ya n'ụdị ụgwọ na ngụkọta ego, yana ọrụ, dị ka iwu, nke enweghị nsonaazụ ihe . Na-arụ ọrụ na ngwanrọ na arụmọrụ nke ọrụ na ntinye nke ngwa ọrụ, ị nwere ike ịmepụta ngwa dị ka akwụkwọ bụ isi nke gosipụtara arụmọrụ nke ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọtụtụ akwụkwọ, dị ka iwu site n'aka onye zụrụ ahịa, akwụkwọ ọnụahịa na mmecha.
Ntọala akpaaka nke usoro ọrụ ọrụ na-agwa gị ozugbo banyere ọnọdụ nke igbu ha, gụnyere oge nke ngwa mbido n'oge usoro iwu, mgbe egosighi ya na akụkọ ahụ, anaghị aga igbu ya, na ịkwụ ụgwọ site n'aka ndị ahịa enweghị ike ịhazi ya.
Ekele maka mmemme nke na-achịkwa arụmọrụ nke ọrụ na ntinye nke ngwa ọrụ, ị nwere ozi zuru oke gbasara ọnụọgụ ugboro, nke na-ekpebi oge ole a na-arụ ọrụ ahụ, yana ọnụọgụ dabere na ọkwa nke mgbagwoju anya ma ọ bụ ọnọdụ pụrụ iche na ịnye ọrụ. Ngwa ngwanrọ ahụ na-ebufe ngwa ahụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ozugbo arụchara ya, nhọpụta nke ndị na-ahụ maka ikpe ahụ, yana ihe ndị dị mkpa, yana usoro nke ịnakwere ndị ahịa maka ịkwụ ụgwọ na arụmọrụ nke oge ọrụ.
Akụrụngwa na-akpaghị aka na-enyere gị aka ịchọpụta usoro ịkwụ ụgwọ site na ịkọwapụta naanị ụgwọ ọrụ nke metụtara ngwa a. Usoro ahụ n'onwe ya na-abanye n'usoro nkwekọrịta ma nye ohere maka ndepụta nke akwụkwọ, nke ọ na-egosi ihe ọmụma banyere ndị ahịa, iwu, na ihe omume emere, yana njirimara ọnụahịa, n'ụdị ọnụahịa na ego akọwapụtara na akwụkwọ.
N'ime usoro ihe omume ahụ, ọnọdụ nke ngwa ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa ma na-ekpebi n'ezie ihe usoro ahụ na-ede mgbe edere akwụkwọ ahụ, ya bụ, ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ meghere, yabụ na ọ nweghị ihe mere n'oge edenye ya, mana naanị ngwa ahụ gosipụtara na ndepụta ahụ nke ngwa. Ọ bụrụ na mmemme ahụ ekpebie ọnọdụ nke akwụkwọ ahụ, dị ka ọ na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, a na-ezube ọrụ na oge a na-emepụta ụgbọ mmiri, a na-ebufe ihe ndị ahụ site na ụlọ nkwakọba ihe ma na-akwụ ụgwọ site n'aka onye ahịa, yana arịrịọ n'onwe ya pụtara akụkọ niile. Ọ bụrụ na ọnọdụ nke ogbugbu ke usoro, otu ihe ahụ na-eme dị ka mgbe ikenye ndokwa nke Mbupu nke ngwaahịa akwụkwọ gbakwunyere payroll ka executor na-arịọ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na mmemme ahụ na ntinye nke arụmọrụ nke ọrụ na ntinye nke ọrụ, a na-echebara usoro nke akwụkwọ ahụ n'onwe ya, nke, n'aka nke ya, na-egosi na onye ahịa ahụ maara usoro ọrụ, ndokwa akwadoro nke iwu ọrụ na oke ndị ọzọ nke azụmahịa ahụ.
Site na mmemme ngwa ngwa akpaaka nke mmechi nke ihe omume, ị na-ekpebi n'ụzọ ziri ezi usoro nke nkwekọrịta ha na-egbu, ụdị ọrụ a ga-enye, nke nwere mmetụta bara uru na ịchekwa oge mgbe ị na-etinye ngwa ma nye aka na mmụba n'ọnụ ọgụgụ nke emechara iwu na uru nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ngwa nwere ọtụtụ ọrụ ọrụ bara uru dị ka ihe okike nke anyị nwere ọtụtụ ihe ọmụma dị na arịrịọ na akụkọ ihe mere eme ha maka imebi ikpe na ịnye ndị ahịa ọrụ, ọrụ nke ngwa maka ịgbakọ ụgwọ ọrụ maka ndị na-arụ ọrụ ọrụ, nkwadebe ụdị ego ọ bụla na ịkọ akụkọ ụtụ maka mmegharị na mmegharị nke ego na ụlọ ọrụ ahụ, na-edozi ihe ndị ahịa na mmemme ahụ n'ụdị ụkpụrụ ndị ahụ onye ahịa na-enye maka arụmọrụ nke ọrụ ọrụ, na-egosi oke ọrụ, site na ịba ụba ụkpụrụ nke oge, ọnụọgụ na ọnụọgụ maka ọrụ na ọrụ ndị a sụgharịrị, na-edozi n'ụdị tabular ihe ndị metụtara, nke a na-eji eme atụmatụ ihe onwunwe iji mezuo iwu, ntinye data akpaka na aha nke ihe, oke ha na njirimara nke batches ha na mpempe akwụkwọ, jupụta data na ihe ndị achọrọ dabere na nkọwa, yana dị ka nnweta ọrụ nke ịchekwa ihe n'ụlọ nkwakọba ihe.
Mkpebi ọkwa dị na mmemme ahụ maka ihe ndị edere ede na ọnụahịa ọnụahịa mgbe ị na-eme nkwekọrịta ahụ, yana ngwongwo ndị e resịrị ndị ahịa na mgbakwunye nke ụgwọ ọrụ. Na-ejuputa usoro ihe omume nke ngalaba tabular na ụgwọ ọnwa nke ndị na-eme ihe na iwebata pasent, ọ bụrụ na akọwapụtara usoro ịkwụ ụgwọ dị ka ụgwọ ọnwa yana pasent nke ngwa ọ bụla. Ihe iche iche nke ikike nnweta na sistemu ngwanrọ maka ndị ọrụ nke nzukọ, dabere na oke nke ikike gọọmentị ha. Okike nke nyocha nke ihe omuma nke omume nke ndi oru ulo oru. Ngụkọta akpaaka ọnụahịa maka ịrụ ọrụ n'ahịrị nke ọ bụla nke tabular, dabere na usoro ngụkọta oge. Ohere enwere ike ịdebe akwụkwọ, yana ịsụgharị ya na usoro kọmputa ọ bụla. Inye ọkwa dị elu nke nchekwa nke usoro ihe omume n'ihi iji okwuntughe nke mgbagwoju anya. Nhazi nke ụdị nyocha na nyocha na atụnyere yana ike ịme mgbanwe na mgbakwunye ọ bụla, dabere na ọchịchọ ndị ahịa.
Accounting nke iwu
Za ajụjụ maka iwu iji mezuo
aza ajụjụ nke arịrịọ
ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ nke mkpesa
aza ajụjụ nke onye ọrụ
nyochaa ọrụ na arịrịọ
Akpaghị aka na-achịkwa usoro njikwa
akpaghị aka ozi usoro ịtụ
Akpaaka nke nhazi ngwa
Njikwa iwu ndị ahịa
Ngalaba njikwa na mmanye
Nchịkwa na nkwenye nke ogbugbu
Control n'ọhịa nke ịtụkwasị iwu
Njikwa mmezu nke iwu
Nchịkwa nke arịrịọ
Njikwa nke iwu mezuo
Njikwa usoro ndị ahịa
Usoro nkwado ndị ahịa
Database maka ijigide iwu
Database maka iwu aza ajụjụ
Na-emeso mkpesa ndị ahịa
Ngalaba nchịkwa nke mmezu nke akwụkwọ
Download electronic log maka iwu nke ọrụ aza ajụjụ
Download iwu mmemme ego
Enterprise iji management usoro
Formsdị njikwa mmebi iwu
Usoro njikwa mmezu
Nsogbu njikwa igbu
Akụkụ nke nyocha na mpaghara ọrụ
Dị nhazi nke njikwa igbu
Nhazi usoro ego
Mmelite nke usoro njikwa njikwa ọrụ
Imezi njikwa nke ọma
Ọrụ mmezi usoro mmezi
Usoro ihe omuma iji nye iwu
Banye maka ịdekọ iwu nke ọrụ
Intanọgide na-enwe akwụkwọ mkpesa na ntụnye
Nchịkwa nke ịzụrụ na iwu
Njikwa nke ịzụta na ịtụkwasị iwu
Nyochaa mmezu nke usoro ịzụta
Ndebanye aha ndebanye na ntanetị
Njikwa oru oru
Ihe njikarịcha na ndozi
Usoro nkesa usoro
Nhazi usoro na ogbugbu
Usoro njikwa njikwa
Managementdị njikwa usoro
Tọọ ọnụ ọgụgụ
Iwu maka mmepe usoro ihe omuma
Usoro nyocha usoro
Nhazi nke njikwa na nkwenye nke arụmọrụ
Nhazi nke njikwa maka arịrịọ
Hazi ọrụ ọrụ ozi
Mee atụmatụ igbu
Usoro na ụdị ịchịkwa ogbugbu
Usoro maka nyochaa mmebe nke nkwekọrịta
Usoro executions akara
Mmemme maka ịkọ ajụjụ nke ndị ahịa na iwu
Mmemme maka dejupụta asambodo
Mmemme maka arịrịọ
Mmemme maka ịrụ ọrụ na arịrịọ
Ogo njikwa nke igbu egbu
N'ikuku na ndebanye aha nke arịrịọ
Ndebanye nke mkpesa na ngwa
Ndebanye aha nke elektrọnik
Ndebanye aha nke arịrịọ sitere na ụlọ ọrụ iwu
Usoro ndebanye aha nke arịrịọ
Arịrịọ maka igbu ọrụ
Arịrịọ njikwa usoro
Usoro njikwa nnyefe ọrụ
Ọrụ ụlọ ọrụ akpaaka
Usoro njikwa njikwa ọrụ
Mpempe akwụkwọ nke ịhazi ajụjụ
Uzo nke oru na aririo
Sistemụ njikwa ịtụ
Usoro nke usoro ntanetị
Sistemụ maka ịza ajụjụ onye ọrụ
Usoro maka ịtụkwasị iwu
Usoro nke nyocha ngwa
Sistemụ njikwa nke arịrịọ
Sistemụ ọrụ yana arịrịọ
Usoro njikwa njikwa arụmọrụ
Usoro maka igosipụta njikwa banyere igbu
Usoro mmemme na ọrụ
Ọrụ nke ozi ozi
Usoro ọrụ na mkpesa
Na-arụ ọrụ na nkwupụta na mkpesa ndị ahịa
Soro ndị ahịa rịọ
Na-arụ ọrụ na mkpesa na nkwupụta
Na-arụ ọrụ na mkpesa na aro
Na-arụ ọrụ na mkpesa na nzukọ
Na-arụ ọrụ na arịrịọ na-abata
Soro ndị otu chọrọ rụọ ọrụ